प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुँदै, तरल चीजहरु खान थाले ! – " सुलभ खबर "
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुँदै, तरल चीजहरु खान थाले !
मिर्गाैला प्रत्यारोपणको दोस्रो दिन आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुँदै गइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले तरल चीजहरु खान थाल्नुभएको र अन्य सूचकहरु राम्रो रहेको उहाँका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा बुधबार उहाँको दोस्रो पटक मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरिएको थियो ।
हाल उहाँलाई शल्यक्रिया कक्षबाट प्रत्यारोपण उपचारकक्षमा राखी उपचारलाई निरन्तरता दिइएको छ । उहाँको पछिल्लो स्वास्थ्यस्थतिबारे अस्पतालले हरेक दिन ४ बजे औपचारिक जानकारी दिनेछ । प्रधानमन्त्री ओली मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि यही फागुन १९ गते अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको बुधबार सफल मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको हो । उहाँलाइ भान्जी नाता पर्ने समीक्षा संग्रौलाले मिर्गौदा दान गर्नुभएको हो । चार घण्टा ४५ मिनेटको शल्यक्रियाबाट ओलीमा मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको हो ।
ओलीले प्रत्यारोपण सकिएयता बिहीबार बिहान ८ बजेसम्म १० लिटर भन्दा बढी पिसाब गरेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. प्रेम खड्गाले जानकारी दिनु भएको छ।उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले पिसाब गर्नु भएको छ, यसको अर्थ नयाँ मिर्गौलाले काम गर्न थालेको छ ।’